Shina elastika vita amin'ny afo tsy misy afo mirehitra sy mpanamboatra | Weicheng
Mampiasà emulsion miorina amin'ny rano ho toy ny fotony, mametraka ny faritra ampiharina: mampiditra ny tombo-kase ny fefy varavarana misy fepetra henjana hisorohana ny setroka. Ny fanitarana karazana fitehirizana afo, mba hahazoana ny fiarovana ny afo ilaina, ampiharo ny hateviny voatondro mba hamaritana fa ny tombo-kase dia mifandray amin'ny ambonin'ny fantsom-pototry ny fantsona hahazoana ny hery fametahana lehibe indrindra. Ho an'ny mastic be loatra, alohan'ny hanamafisana azy dia azo esorina amin'ny rano. Ny elastika tsy misy afo mirehitra, diovy ny fisokafany ary miomàna hametaka ny faritra iombonan'ny FS-I dia tokony hesorina potipoti-javatra miparitaka, vovoka, tasy menaka, fanala, savoka sns ... ary ataovy maina. Ny singa iray, miorina amin'ny rano, asidra akrilika mitera-afo dia misy tombo-kase avo lenta. Izy io dia afaka manohitra ny mari-pana ambony sy ny tsindry ambony. Izy io dia afaka manohitra ny mari-pana ambony, ny maripana ambany, ny avo-avo, ny antonony, ny tsindry ambany ary ny tsindry ratsy, ary koa ny hafainganam-pandeha. Mpamaritra singa tokana, tsy miraikitra, mena mainty, famehezana paty mainty, tsy manamafy amin'ny maripanan'ny efi-trano ary miakatra amin'ny maripana ambony Ny tombo-kase mampidina afo dia karazana iray hafa mifehy afo. Tao anatin'izay taona faramparany, mba hahafeno ny filan'ny fampandrosoana ny teknolojia fitsitsiana angovo, ampiarahana amin'ny tombotsoan'ny vokatra eto an-toerana sy any ivelany, vita amin'ny akora molekiola avo io.
Anaran'ny vokatra Fanamafisam-peo matevina amin'ny elastika
Modely famaritana 25 pcs / boaty
Tombontsoa momba ny vokatra Singa tokana, miaraka amin'ny malefaka sy ny firaiketam-po tsara, mamorona firafitra tambajotra matevina aorian'ny fandoroana azy amin'ny afo; afaka misoroka tsara ny famindrana ny lelafo sy ny hafanana; mahomby mirehitra maharitra, fananganana mety
Sehatra fampiharana 1. Fametahana ny banga amin'ny gorodona nafindra toerana, sisin'ny rindrina, fantsona mekanika, fantson-drivotra, fantsom-panafody mafana, sns. ny mpiray eo an-tampon'ny rindrina sy ny gorodona; 3. Exposure Ny seam eo ambanin'ny maripana avo dia manana fepetra henjana amin'ny famehezana ny fisorohana setroka; ny famehezana ny zaitra vavahady fifandraisana
Fanoherana afo 120min
fametrahana ny tombo-kase tombo-kase ny zana-baravarana miaraka amin'ny fepetra henjana hisorohana ny setroka. Ny fanitarana karazana fitehirizana afo, mba hahazoana ny fiarovana ny afo ilaina, ampiharo ny hateviny voatondro mba hamaritana fa ny tombo-kase dia mifandray amin'ny ambonin'ny fantsom-pototry ny fantsona hahazoana ny hery fametahana lehibe indrindra. Ho an'ny mastic be loatra, alohan'ny hanamafisana azy dia azo esorina amin'ny rano. Ny elastika tsy misy afo mirehitra, diovy ny fisokafany ary miomàna hametaka ny faritra iombonan'ny FS-I dia tokony hesorina potipoti-javatra miparitaka, vovoka, tasy menaka, fanala, savoka sns ... ary ataovy maina. Ny singa iray, miorina amin'ny rano, asidra akrilika mitera-afo dia misy tombo-kase avo lenta. Izy io dia afaka manohitra ny mari-pana ambony sy ny tsindry ambony. Izy io dia afaka manohitra ny mari-pana ambony, ny maripana ambany, ny avo-avo, ny antonony, ny tsindry ambany ary ny tsindry ratsy, ary koa ny hafainganam-pandeha. Mpamaritra singa tokana, tsy miraikitra, mena mainty, famehezana paty mainty, tsy manamafy amin'ny maripanan'ny efi-trano ary miakatra amin'ny maripana ambony Ny tombo-kase mampidina afo dia karazana iray hafa mifehy afo. Tao anatin'izay taona faramparany, mba hahafeno ny filan'ny fampandrosoana ny teknolojia fitsitsiana angovo, ampiarahana amin'ny tombotsoan'ny vokatra eto an-toerana sy any ivelany, vita amin'ny akora molekiola avo io.
Amin'ny ankapobeny, ny fomba mitsangana dia ampiasaina amin'ny famantarana, izay mizara ho FV-0, Fv-1 ary Fv-2 araka ny vokatry ny fitsapana hatramin'ny avo ka hatramin'ny ambany. Ampiasaina indrindra amin'ny famehezana ny firafitry ny rindrin'ny lamba firakotra, ary mila ny fahaizan'ny deformation anti-famindran-toerana sy ny fisorohana ny afo sy ny setroka, ny acrylic acrylic acid-proof sealant dia mifanaraka amin'ny karazana basy. Ny fehezan-kevitry ny tombo-kase famaritana afo dia karazana fitaovana fanamafisam-peo plastika polymer ho an'ny plugging, izay misy ny tombo-kase roa sy ny famehezana afo, ary mety amin'ny fananganana afo-porofo. Ny sehatry ny fananganana dia misy fantsom-by, fantsom-pitrandrahana hafanana ary fitambaran-trano. Ireo kofehy vita amin'ny adhesive ampiasaina amin'ny vavahady misy porofon'ny afo-tombo-kase tombo-kase dia tsy afaka mahafeno ireo fepetra takiana amin'ny afo, jereo tsara fa tsy misy teboka fotsy misy akora tsy mirehitra amin'ny fehikibo. Raha mampiasa jiro ianao handrehitra azy ireo, tsy izany ihany fa tsy mametraka fantsom-pametahana tombo-kase ianao, izay misy fiantraikany lehibe amin'ny fisorohana afo sy ny asan'ny fisarahana setroky ny varavaran'ny afo vy.
Ny tombo-kase mirehitra afo dia mety amin'ny fananganana iraisana eo amin'ny valindrihana sy ny vatan'ny rindrina, indrindra ho an'ny fiarahana lava kokoa. Satria tsotra ny fanamboarana famafazana, afaka mamonjy herin'olombelona izy io ary mampihena ny vidiny mandritra ny fanamboarana. Rehefa avy diovina amin'ny rano dia azo sitranina sy hosodoko tanteraka. Ny sakan'ny ambony indrindra amin'ny fanoherana ny afo dia mety ho 6 santimetatra, ary ny fahombiazan'ny fanoherana ny toeran'ny mpiray dia mety hahatratra 2 ora.
Manaraka: Famonoana afo maharitra